iMessage inogona kuuya kuLinux neWindows, asi zvine basa here? | Linux Vakapindwa muropa
iMessage inogona kuuya kuLinux neWindows, asi zvine basa here?
Makore apfuura, apo Facebook yakatenga WhatsApp, pakanga paine kutaura kuti Google yakanga yarasa mukana wakakura. Icho chaive chiitiko chakajekesa kwatiri kuti rudzi urwu rwekushandisa rwakakosha kukwezva vashandisi, chimwe chinhu icho Apple chinoita nacho iMessage. Iyo app iyo muIOS uye macOS inongodaidzwa kuti "Meseji" chishandiso chikuru, ine akawanda akanaka mapoinzi, asi imwe isina kunaka: inongowanikwa chete muapuro ecosystem.
Izvi zviri kuzochinja munguva pfupi iri kutevera. Amnesia Labs yakagadzira mutengi uye sevha inotibvumidza kushandisa iMessage paWindows uye Linux. Uye zvakare, ivo zvakare vanoona kuti vane hurongwa hwekuvhura vhezheni yemafoni nhare, izvo pakutanga zvaizoreva kuti yaizowanikwa yeApple uye, pamwe, mamwe masisitimu anoshanda eApple. Asi hazvisi zvese zvinonakidza sezvazvinoratidzika.
1 iMessage paLinux, asi kwete yakamira
2 Zen Inokosha Uchishandisa?
iMessage paLinux, asi kwete yakamira
Dambudziko nderekuti Zen, zvinova zvavakadaidza kuti mutengi, inofanirwa kushanda zvichienderana neMac, kunyange hazvo kambani ichivimbisa kuti inogona kushanda pane chero Apple komputa ichiri kushanda:
Iyo sevha, Zen Bridge, inoshanda zvakakwana pane zvekare uye zvechinyakare Apple uye Mac Minis malaptop ari kuunganidza guruva. Kune imwezve 'gore-yakavakirwa' nzira, isu takavewo nekubudirira nema visualized Macs achimhanya pane chaiwo Apple maseva (ayo aisazoputsa Apple's TOS, yako iCloud inopinda nemufaro mairi) Vamwe vatapi veVPS vanopa izvi nemari inosvika $ 12 pamwedzi.
La yekutanga yeruzhinji vhezheni ichave ichiwanikwa mwedzi uno. Rimwe dambudziko pakushandisa Zen nderekuti uchafanirwa kubhadhara muripo unenge uri pakati pe $ 3 ne $ 5, asi unogona kutenga sevhisi izere nekutengesa kwe $ 10 kusvika $ 15. Tichifunga zvese izvi, isu tinofanirwa kuzvibvunza isu kuti: zvakakosha here?
Zen Inokosha Uchishandisa?
Zvakanaka, semumaitiro mazhinji, mhinduro ndeyekuti "zvinoenderana." Semunhu anoshandisa zvishandiso zvemarudzi ese, kusanganisira akati wandei kubva kuApple, ini ndingati kwete, kana kwete munyika senge Spain MuUnited States, iMessage inoshandiswa zvakanyanya, zvinonzi inenge hafu yevagari vemo vane chimwe chigadzirwa cheApple, asi hachina kufanana pasirese. Mune dzimwe nyika tinovimba zvakanyanya nekushandisa senge WhatsApp, kune vatinosangana navo, kana teregiramu, kune kumwe kumwe kushandiswa kwekutaura.
Kunyangwe iyo yekupedzisira iri pfungwa yemupepeti. Zvichida (ini handifunge zvakanyanya) kuti vamwe venyu vachanyanya kufara kunzwa idzi nhau. Inyaya yako here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » iMessage inogona kuuya kuLinux neWindows, asi zvine basa here?
Icho chisina basa kushanda kwandiri. Ini handizive chero munhu anoishandisa. Uye kuti ndine shamwari nevatengi vanoshandisa zvese Mac ne iPhone uye vasingavhure izvi zvachose uye nekutevera echinyakare seWhatsApp. Ini handibhadhare kana sendi rimwe kunze kwekudhura.
Yakarambidzwa kushandisa gore. Kana zvakanakira kuenderera neyemhando yechinyakare